VaMnangagwa Vokurudzirwa Kuti Vadzinge VaMukupe Basa
VaEmmerson Mnangagwa naVaTerrence Mukupe.
Vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa kuti vadzinge basa mutevedzeri wegurukota rezvehupfumi VaTerrence Mukupe vanonzi vave kusvibisa hurumende nebato reZanu-PF nemaitiro avo ekunyomba uye kuda kurova vanhu vavanenge vasingawirirane navo uye vave kupomerwa mhosva yekuba nharembozha yemudzimai wemumwe mutori wenhau.
Mutori wenhau webepanhau reNewsday, Blessed Mhlanga vanoti nemusi weChina akapona nepasaka reshumba mushure mekunge VaMukupe vada kumurova pachirongwa chavaiita panhepfenyuro yeZBC yeSport FM.
VaMhlanga vanoti apo vainge voda kurohwa, mudzimai wavo ainge avaperekedza sezvo chirongwa chaiiitwa manheru akayedza kutora vhidhiyo nenharembozha yake achibva aibvutirwa nechisimba naVaMukupe. Kusvika parizvino foni iyi haisati yawanikwa.
VaMhlanga vanoti pavakada kuyedza kunomhan’ara myaya yavo kumapurisa ekuHighlands vakaona VaMukupe vatosvikako vave kuti ivo ndivo vaida kuvarova.
Asi VaMhlanga vanoti kunyangwe VaMukupe vakatora nharembozha yemudzimai wavo pakazara vanhu vari kuramba nayo.
Nemusi weChina wakare, VaMukupe vanonzi vakanyomba VaBiti panhepfenyuro nezvenyaya yekumwa mapiritsi anodzivirira hutachiona hweHIV/AIDS. Mazuva mashoma apfuura VaMukupe vanonziwo vakaudza vamwe vatsigiri veZanu PF pamusangano kuti mauto haaizobvuma kuti mutungamiri webato rinopikisa VaNelson Chamisa vatungamire nyika vakakunda musarudzo. Mutauriri webato reNPP rinotungamirwa naAmai Joyce Mujuru VaJefferyson Chitando vaudza Studio 7 kuti VaMukupe vanofanira kudzingwa basa.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube VaKurauone Chihwayi vati VaMukupe vave nenguva vachitadza kutaura. VaChihwayi vatiwo vari kuenderera mberi vachisvibisa bato reZanu PF vakati zvave kumutungamiriri weZanu PF VaEmmerson Mnangagwa kuona kuti vavadzinge pazvigaro zvehutungamiriri pamwe nemubato
Imwe nyanzvi munezvematongerwo enyika Amai Eustinah Muchegwa vaudzawo Studio 7 kuti nyika yakatarisana nesarudzo, veruzhinji vanofanirwa kuongorora vanhu vavanoisa pazvigaro. Amai Muchegwa vatiwo vanhu vanehunhu sehwaVaMukupe havafanirwi kutombosarudzwa muhutungamiriri zvachose.
VaFarai Mabeza vanotiwo vanoshamiswa kuti munhu ane hunyanzvi munyaya dzezvehupfumi saVaMukupe vangaita hunhu hunonyadzisa. Vatiwo pamusoro pekusarudza vane hunyanzvi vatungamiriri vanofanirwa kuvawo nehunhu hunoyemurika.
Munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Doctor Evans Masitara vatiwo havatarisiri kuti vatungamiri vakasarudzwa neveruzhinji vashore vamwe vanhu nenyaya dzehutano.
VaMasitara vati mashoko emutevedzeri wegurukota rezvemari aya anowedzera kusarudzwa nekutarisirwa pasi kwevanorarama nehutachiona vakati vanovimba kuti mukuru wenyika VaMnangagwa vachatora matanho kune gurukota ravo.
VaTendai Biti varamba kutaura neStudio 7 nezvakaitika nezuro pakati pavo naVaMukupe.
VaMukupe vanga vasingadairi nharembozha yavo kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro penyaya irikutaurwa neveruzhinji kuti vadzingwe basa.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri webato reZanu PF VaSimon Khaya Moyo kuti tinzwe kana bato iri richatora matanho nehunhu hwaVaMukupe.
Asi munguva shoma yapfuura, VaKhaya Moyo vakabudisa gwaro rekushoropodza VaMukupe mushure mekunge vati vemauto havazopi masimba kune mapato anopikisa kunyangwe akakunda musarudzo dzegore rino. VaMukupe vaswerawo vachishoropodzwa neveruzhinji pamadandemutande akaita seFacebook netwitter.
Asi vamwewo vanga vachishorawo VaBiti vachiti naivowo havagoni kutaura semutungamiriri.
Nhumwa yeUnited Nations Yokurudzirwa Kutaura Pamusoro peMhirizhonga Iri Kuitika Munyika
Dzimwe Nyanzvi Dzinoti Hadzione United Nations Ichibudirira Kuti Iudze America neEU Kuti Zvirango Zvibviswe
Vamwe Vokwira kuMatare Vachiti Hutungamiri hwaVaEmmerson Mnangagwa Hahusi paMutemo